मात्रृवात्सल्य त्यो खट्किरहनेछ… – HostKhabar ::
मात्रृवात्सल्य त्यो खट्किरहनेछ…
by उमालाल आचार्य
डिजाइन : मानबहादुर खड्का
मनमा बिषय फुर्दा तनमा जाँगर चल्दा लेखिए केहि मिठा नमिठा कथा र कविताहरु । तर यो कथा होइन जीवन भोगाइमा सित्ती बिर्सन नसकिने एउटा व्यथा हो, यथार्थमा मृत्युले घरभित्र पसेर गरेको ज्यादतीको बयान तथा वेदना हो ।
दिनहुँ तमाम पार्थिव शरीर मसान घाहरुटमा जलाइन्छन् । अनगिन्ती शव गाडिन्छ्न् चिहानका खाल्डाहरुमा । कुनै प्रवाह नराखी निरन्तर चलिरहन्छ दुनियाँ बेहिसाव आफ्नो दैनिकिमा । मृत्युले जब कोही आफन्तजनलाई टपक्क टिप्छ त्यतिखेर दुनियाँसँग छुटेर मान्छे हुँदोरहेछ बेचैन र अत्यन्त आतंकित । जसलाई लाग्दछ चोट उसैले व्यहोर्नु पर्दछ घाउ, झेल्नुपर्छ नियति । शाश्वत सत्य यही रहेछ जगतको ।
आमा एक्कासि बिरामी भएपछि हामीले तत्काल उपचार खोज्यौं, अस्पतालले पनि भर्ना लिएर आइसियुमा राख्यो । ल्याब टेस्टको आधारमा डाक्टरले श्वासप्रश्वास तथा हृदयघात सम्वन्धि समस्या देखाउदै भने, ‘अब त्यति लामो आशा गर्न सकिदैन ।’ तब हामी आश्चर्य चकित, स्तब्ध, मर्माहत भयौं र विखलबन्दमा पर्‍यौं । हाराहारी असी बर्षको जर्जर बृध्द शरीरले त्यत्रा गंभिर अप्ठ्याराहरु कति दिन कसरी धान्ला ! चिन्ताको कालो बादलले मन अँध्यारो बनायो ।
करिब हप्तादिन उपचार चल्दाचल्दै अस्पतालमा एकाएक कोरोनाको हाउँगुजी पसेपछि दुर्भाग्य र बाध्यताबश आमालाई यथा अवस्थामा घर फिर्ता गर्नुपर्‍यो । ओखतीको खुराक बढ्दै र खान पिनको खुराक घट्दै गएपछि स्वतः शरीर दुब्लायो, छिन्यो र घट्दै गयो ।
न्यौपाने थरका एउटा साहित्यकारले लेखेका छन, ‘संसारमा सास फेर्न जस्तो सहज र सरल कार्य अर्को केही छैन, यही सरल कार्य कुनै घडी संसारकै अत्यन्त कठिन कार्य पनि भैदिन्छ ।’ हो, त्यस्तै भयो आमालाई, सास फेर्न मुस्किल अत्यन्त मुस्किल पर्‍यो । विधाताले संसारमा समस्त प्राणिलाइ निशुल्क र सहजतामा सास फेर्ने परिपाटी मिलाएका छन् । आमालाई विधाताले हावामा दिएको सासले पुगेन र महंगो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो । दैनिक एक सिलिन्डर अक्सिजनको दरले करिब महिना दिन सम्म कृतिम सासले प्राण थाम्नु पर्‍यो ।
परिस्थिति थोरै अनुकुल भएपछि विशेषज्ञ डाक्टर खोज्दै सुरु अस्पतालको सिफारिसमा अब्बल अस्पतालतिर लग्यौं । नातागोता इस्टमित्र र आफन्तजनहरुले निरन्तर चासो राखे भरपुर सहयोग गरे । ती मेरा असल शुभचिन्तकहरु यो हृदयको गहिराईमा छन, तिनै उदार व्यक्तिहरुको ऋणि छु आभारी छु । केहि दिनको विशेष उपचार पछी विशेषज्ञ डाक्टरले आमाको नाक मुखबाट अक्सिजनको पाइप हटाईदिए भोक जगाइदिए र उनले पनि उस्तै संकेत गरे । अलि परको पीर बिर्से झैँ गरेर केहि खुसी र आशासँग आमालाई घर ल्यायौं । आमाको अवस्था बारे निरन्तर चिन्तन राख्ने आफन्तहरूलाई जवाफ त्यही दियौं जे सत्य थियोे । अब आमाको स्वास्थ्य अबस्थामा सुधार भैरहेको देखिन्छ ।
नियतिलाई सायद हाम्रो खुसी मन्जुर थिएन । आशा फुल नफुल्दै बिस्तारै ओइलाउन थाल्यो ।ईश्वरको अस्तित्व कसैले स्वीकार गरून् या नगरुन, यो ब्रह्माण्डको व्यवस्था संचालन गर्ने त अवश्य एउटा प्रबन्ध छ, छ । यो मनमा यही विश्वासले घर गरेको छ । आमाको कोहि अदृश्यसँग संवाद चलिरहेको छ ।
नियतिलाई सायद हाम्रो खुसी मन्जुर थिएन । आशा फुल नफुल्दै बिस्तारै ओइलाउन थाल्यो । साँझ बिहान नियमित ओखती खादाखाँदै पनि फेरि हातगोडा सुन्निएर आमा झन झन कमजोर हुनुभयो र ओछ्यानमा थला पर्नुभयो । आमा ग्लस्त थला परेपछि हरेश खाएर हारेका सिपाहीको अवस्था झैँ भयो हाम्रो मन । केहि रातहरुमा हामी ओरिपरी रहेका परिवारजनसँग बात गर्दागर्दै बिषयान्तर गरेर आमाले अरु कसैसँग कुरा गर्नु थाल्नुभयो । ‘खान्छु भन्छ खान्न भन्छ । दोधारे कुरा गर्न कहाँ पाइन्छ?’ मान्छु भन्छ फेरि मान्दैन भन्छ । त्यसले खोजेको केहो एकिन हुनुपर्छ ।’ हामी बाहेक अर्को पक्ष कोही छैन, कतै केही देखिदैन तर आमा त्यसरी शुन्यतासँग सहजै कुराकानी गर्दै कराउन थाल्नुभयो जसरी चित्त नबुझ्दा पहिलाका दिनहरूमा हामीसँग कराउनु हुन्थ्यो । मद्दतका लागि आफ्ना छोरा भतिजा र बुहारीहरुलाई गुहार्न थाल्नुभयो ।
ईश्वरको अस्तित्व कसैले स्वीकार गरून् या नगरुन, यो ब्रह्माण्डको व्यवस्था संचालन गर्ने त अवश्य एउटा प्रबन्ध छ, छ । यो मनमा यही विश्वासले घर गरेको छ । आमाको कोहि अदृश्यसँग संवाद चलिरहेको छ । दृश्यमा आमा मात्र हुनुहुन्छ, अदृश्यमा को छ ? मृत्यु ? आमाले के मृत्यु देखि रहनुभएको होला ? यसरी वैरागी भावना खेले आफ्नो मन मश्तिष्कमा रातभर दिनभर । जसरी देखिन्छ्नी सपना निन्द्रामा ? हो त्यसरी । चलचित्रमा सिलसिलेवार गाँसिन्छन त घटना ? हो त्यसरी । तब कथा जस्तै भएर आयो एउटा व्यथा ।
दृश्य … आमा, अदृश्य ….. मृत्यु
अदृश्य . सांसारिक भोगाइ समाप्त हुने बिन्दुमा आइरहेछ । त्यसैले हेर श्रेष्ठ प्राणीकि नारी जात । जीवनसँग फुर्सद लिने आफ्नो समय नजिक आइसकेको छ, मैले जनाउ दिइसकेको छु । तयार रहनु ।
दृश्य . बिल्कुल हुनेछैन तयार । मेरो कठिन संघर्ष अहिलेको दुनियाँलाई थाहा छैन, ज जसलाई थाहा थियो प्रायः ती सबै परमधाम भैसके । पति वियोगको रहमा डुबेका बखत जन्म दिएकी हुँ मेरो एक मात्र सन्तान छोरालाई । किशोर वयबाट उकालो लाग्दा समेत त्यसको नादानिपन र मुर्ख्याइँ निखारेर सज्जन बनाउन कति पहरासंग कुइनो जुदाएकि छु, फलामका चिउरा चपाएकी छु । अपजसका भारी उचालेकी छु । कैयौं रातहरुलाई आँसुले धोएर उज्याला र सेता पारेकिछु । चेतना पसेपछि बल्ल पछिल्ला दिनमा भरोसाको खामो गाढेर छोराले सन्तोषको छानो हालेको छ । अझै व्यवहार धान्न जानेको छैन । त्यसका रगतमा उम्रेका नयाँ लालाबाला हुर्काउन बाँकी छ । त्यसको फुलबारी गोडमेल गर्न बाँकी छ । बाँकी छ घाम ताप्न, बाँकी छ शीतल बस्न । सपना सबै बाँकी छन ।
कैयौं रातहरुलाई आँसुले धोएर उज्याला र सेता पारेकिछु । चेतना पसेपछि बल्ल पछिल्ला दिनमा भरोसाको खामो गाढेर छोराले सन्तोषको छानो हालेको छ । अझै व्यवहार धान्न जानेको छैन । त्यसका रगतमा उम्रेका नयाँ लालाबाला हुर्काउन बाँकी छ । त्यसको फुलबारी गोडमेल गर्न बाँकी छ ।
अदृश्य .. त्यसरी जिद्दी गरेर थामिने छैन समय । न कोही बलवानको बलले छेक्न सक्छ मलाई । नसक्छ खरिद गर्न मेरो अस्तित्व कुनै भुवनका धन कुवेरले । फगत मसँग विवाद गरेर बाँकी समय खेर फाल्नु भन्दा नातागोता सन्तानलाई अर्ती उपदेश दिए उत्तम हुनेछ । रहनेछ संझना चिरकाल सम्म बाँच्नेहरुका लागि ।
दृश्य .. अर्ती उपदेश दिउँला । मन खोलेर आशिर्वाद दिन पनि बाँकी छ । आउन् मेरा प्यारा अनुहारहरु बसुन मलाई घेरेर ओरीपरी ।
अदृश्य . मन बचनले राखेका, कर्म र भावनाले डाकेका तमाम आफन्तजन रुग्ण शरीर हेर्न तन मनको अवस्था बुझ्न करुणा बोकेर आए आँसु साटेर गए । आउन बाँकी अरु कोहि देखिन्नन मेरा ध्यान दृष्टिमा ।
दृश्य .. आउन अवश्य कोही बाँकी छ । जसको छाया छ यो कलेजोमा, उ त आउनै बाँकी नै छ । आउँदै छ मेरो माया बोकेर, ल्याउँदै छ मेरो संझनाले तानेर ।
अदृश्य .. कर्मले कमाएका स्वजनहरु सबै त आए । संसारका सबै मानिस आउँदैनन भ्याउँदैनन् र साध्य पनि चल्दैन । तब त फेरि को छन् आउन बाँकी ?
दृश्य .. मेरा आँखामा घुमिरहने, हृदयमा बसिरहने मेरी प्यारी नातिनी आउँन बाँकी छ । उसको बच्चालाई हेर्ने र समाउने धोको बाँकी छ । म उसको कपाल सुम्सुम्याउँछु, गाला पनि मुसार्छु । आँखामा सामुन्ने पारेर अघाउन्जेल उसको मुहार हेर्न बाँकी छ । त्यतिन्जेल नथिच्नु मेरो छाती, दया राख्नु ममाथि ननिमोठ्नु यो घाँटी नखोस्नु मेरो प्राण । हात जोड्छ पाउ पर्छु म विन्ती गर्छु ।
अदृश्य .. दया माया र ममता जो मसँग छदै छैन, तब कसरी स्विकार्नु सक्छु कसैको विन्ती र प्रार्थना ! न रोकिन्छु न कतै छेकिन्छु । जनाउ दिन्छु मिति पुग्दा क्षेणभर तलमाथि नपारी निसंकोच उठाउँछु । जगतमा मेरो कर्तव्य तोकिएको जो छ सो निभाउँछु ।
दृश्य .. याद राख मेरो आँसुको श्राप लाग्ला ।
अदृश्य .. युगहरु बितेर गए, भुतकाल भए । कसैको आँसु र रगतले कहिल्यै बदलिन्न ब्रह्माण्डको शाश्वत नित्य नियम ।
ऐया ऐया…… पिडा मिस्रीत आमाको कारुणिक स्वरले मेरो तन्द्राको डोरी चुटालिदिन्छ । मलाई टाढा जान पटक्कै दिन्न आमाको मायाले । तलमाथि र आमाकै ओरिपरीमा मेरो दैनिकी सिमित भैरहेथ्यो ।
‘आमा हजुरले राति कोसँग कुरा गर्नुभएको हो ? एकचोटि भन्नुसन ।’
‘ हँ ? नानी आउँछे त ?’ मेरो प्रश्नको जवाफ नदिएर आमाले उल्टै निर्मम प्रश्न गर्नुभयो । नानी आउँछे भनुभने उ आउन सक्दिन ढाँटेको हुन्छ, आउँदिन नानी भनुभने प्रतीक्षामा तुषारापात हुन्छ चित्त दुख्छ असैह्य हुन्छ । त्यसैले मध्यमार्गी जवाफ खोजेँ ।
‘समय अनुकुल भएपछी आउँछे आमा ।’
‘के भनेको त्यस्तो ! कठै बरै ! म कसो गरुँ ।’
‘ उठ्नुस आमा अब दवाइ खानुपर्छ ।’
‘म दवाइ खान्न, घाँटीबाट निलिन्न ।’
‘ बिस्तारै खानुहोला, दवाइ नखाए कसरी निको होला ?’
‘अब मलाई दवाइले निको गर्दैन । नानी कहिले आउँछे ?’
‘………….’ म नाजवाफ भएँ । आमाको यो प्रश्नले मलाई पटकपटक नाजवाफ बनाएर मेरो मन बगाइदिन्छ । मेरी छोरीलाई छेकिदिने प्रतिकुल समयलाई धिक्कार्नु बाहेक केहि गर्न सकिएन ।
पछिल्ला केहि दिन यता आमाको घाँटीमा स्वर दबेपछी आवाज मसिनो र अप्रष्ट हुनथाल्यो । उठ्न बस्न र अडिन अनिवार्य कसैको सहारा चाहिने भयो । अवस्था साह्रै बिजोग बनाएर रमिता गर्‍यो परिस्थितिले । उज्यालो भएपछि परिवार सदस्यहरू खटिए आ आफ्नो धन्दामा । निरन्तर आमाको रेखदेख गर्नु दवाइ पानी र भोजन खुवाउनु मेरो दैनिकमा छँदैथियो ।
‘आमा उठ्नुस अरु अलिकति खानुस कागतीपानी ।’
‘खान्न । खोइ केटीहरु कहाँ गए ?’ केटीहरु अर्थात बुहारी र नातिनी बुहारी ।
‘आ -आफ्नो धन्दामा छन । कोहि खाना पकाउदैछन, कोहि बाहिर फेर काम गर्दैछ्न् ।’
‘बोला सबैलाई । सायद आज मरिन्छहोला ।’ आमाको त्यो वाक्यले मलाई अत्यन्त तरल बनायो । आज भाद्र सात गतेका दिन आमाले किन यस्तो अनिष्ट बोल्नुभयो ! मनले हुने नहुने अनेक सोच्न थाल्यो ।
‘आमा किन यति नराम्रो बोल्नुहुन्छ ! हजुरलाई सन्चो लाग्दै त छ, नआत्तिनुसन ।!
‘अब सकियो सबै । तँ टाढा नजाहै !’
‘म चर्पी जान्छु एक पटक ।’
‘झट्टै आइज है !’ वास्तवमा मलाई चर्पी जानू थिएन, बरु बनाउनु थियो पानीमा तुलसीको पात राखेर शालिकराम पखाली मिसाउने पवित्र जल । आमाको त्यस्तो बोलिले मलाई तुलसी पानी बनाउन उक्सायो । चम्चाले पवित्र जल खुवाउँदै सदा झैँ हातगोडा पेट छाती र घाँटी मुसार्दै माडिरहेथेँ,
मुसार्दै गरेको मेरो हात चपक्क समाएर आमाले मलाई एकछिन हेर्नुभयो । के देख्नुभयोहोला त्यो एकछिनमा ! स्तनपानबाट तृप्त भएर आफ्नो काखमा म हाँसेको देख्नुभयो होलाकी ! कि देख्नुभयोहोला चार हातगोडाले मुसा झैँ खुरखुर म दगुरेको ! कि थिरथिर उभिने क्रममा घद्रक्क लोटेर आमालाई हेर्दै पुनः उभिने प्रयत्न गरेको ! संझनामा झर्लक्क देखिन आयोहोला कतै मेरो बालापन ।
मुसार्दै गरेको मेरो हात चपक्क समाएर आमाले मलाई एकछिन हेर्नुभयो । के देख्नुभयोहोला त्यो एकछिनमा ! स्तनपानबाट तृप्त भएर आफ्नो काखमा म हाँसेको देख्नुभयो होलाकी ! कि देख्नुभयोहोला चार हातगोडाले मुसा झैँ खुरखुर म दगुरेको ! कि थिरथिर उभिने क्रममा घद्रक्क लोटेर आमालाई हेर्दै पुनः उभिने प्रयत्न गरेको ! संझनामा झर्लक्क देखिन आयोहोला कतै मेरो बालापन । आमाले के देख्नुभयो थाहा छैन, तर मेरो मनले यस्तै तमाम अन्दाज लगाईरह्यो ।
आमाले अन्तिम एक घुट्को पानी निलेर एकाएक सिलिङतिर हेर्न थालेपछि मेरो मन आत्तिन थाल्यो । म आत्तिदा आत्तिदै आमाले सदाका लागि आँखा चिम्लनुभयो । यसरी पहरा दिंदादिदै पनि उठायो दैवले, मेरै सामुन्नेमा खोस्यो मेरी आमाको प्राण । सकिएन रोक्न छेक्न नियतिलाई । यताउता हेरेँ भित्ता बाहेक केहि थिएन । हो, भित्तामा नौ बजेर अट्ठाइस मिनेट समय देखाएको भित्तेघडी थियोे । आमाको समय रोकियो सदाका लागि ।
आँसुको बाँध फुटेर मन थाम्न सकिएन । कसैलाई बोलाउन सकिन किनकि आमाको निश्प्राण शरीरलाई छोडिजान मन मानेन । सन्नाटामा एक्लै छटपटाएँ । धराशायी भयो चौरासी पुजा लगाउने आमाको सुन्दर सपना । आमाको जीवन रक्षाका लागि गरिएका सबै धामा एकैचोटि गर्ल्याम्म भत्काएर मृत्युले ठूलो हैरानी थपिदियो । यस्तो बेला मनमा सयौं भावना तिब्र गतिमा मच्चिदारहेछन । अँध्यारो पार्‍यो
निभ्यो मेरो घरको मुलबत्ती, मेरो भाग्यको जुन अस्तायो । घटेर गयो परिवार संख्या सँदा सदाका लागि ।
आजकै भविस्यमा समयले ठूलो फेर बदल गर्ने छ । आमाको भौतिक शरीरलाई नामेट पार्नेछ । हामीलाई व्यहोर्न बाध्य बनाउनेछ गरुँगो पिडा र अपुरणीय क्षेती । केहि क्षेणमै उपस्थित हुनेछन् परिवारजन छिमेकी र इष्ट मित्र । आँखा आँखामा आँसु बटुलेर रुनेछन कराउनेछन र स्वर मच्चाउने छन घरभरी ।
आजकै भविस्यमा समयले ठूलो फेर बदल गर्ने छ । आमाको भौतिक शरीरलाई नामेट पार्नेछ । हामीलाई व्यहोर्न बाध्य बनाउनेछ गरुँगो पिडा र अपुरणीय क्षेती । केहि क्षेणमै उपस्थित हुनेछन् परिवारजन छिमेकी र इष्ट मित्र । आँखा आँखामा आँसु बटुलेर रुनेछन कराउनेछन र स्वर मच्चाउने छन घरभरी । अशुभ मानिने उल्टो शंख जोडले चिच्याउने छ अत्यन्त क्रूर लामो आवाजमा मेरो घर आँगनमबाट । तब ओइरिनेछन मलामीहरु आमाको पार्थिव शरीर उठाउन ।
आफन्त जनलाई मलामी बनाउने तागत बोकेको त्यो शंखध्वनि थाक्ने छैन चिच्याउन पटक्कै घाट नपुग्दा सम्म । भस्म खरानी पार्न बनाइएको चितामा सुताइने छ आमालाई र जबर्जस्ती आगो लगाइने छ मबाट । लाचार हुनेछु म आफ्नी जन्मदातृलाई आगो झोस्न, सक्नेछैन मेरो करुणा र दयाले मलाई रोक्न । जुँगा दारी र कपाल खौरेर मात्र पुग्नेछैन, शरीरमा सेता धजा र टाला बेरेर विरुप पारिने छ मलाई । जघन्य अपराध गरेको कोहि अपराधी झैं घरको एक कुनामा सिमित पारिनेछु म ।
यी सबै कर्म आजै सम्पन्न हुनेछन् र त्यसपछि सुरु हुनेछ अर्को अध्याय । सहानुभूति र समवेदना दिन पालैपालो झुम्मिनेछन मेरा आफन्तहरु, तर दिने छैनन् एक मुठी पानी पिउन, किनकि मलाई अरुले छोएको पानी चल्नेछैन । कैयन दिनसम्म त स्वयंपाक्य हुनुपर्ने छ, तर पकाउन पाइने छैन कुनै स्वादिष्ट परिकार, धर्मले छेक्ने छ । आँसु थाम्दै निस्तो भात चपाएर पानीसँग निल्नुपर्ने छ अनिवार्य दिनहुुँ एकपटक । त्यसरी यातना सहन गर्दा समेत पनि मेटिने छैन आमाको नियास्रो र झझल्को । त्यो मात्रृवात्सल्य खट्की रहने छ मनमा चिरकाल सम्म ।!